Qaramada Midoobay Oo Sheegtay In Caasimadaha Somaliland Horu Mareen, Balse Bulshaduu Danyarta Ahayd Ay Xoolihii Ka Baaba’een |
Hargeisa(GNN):-Qaramada Midoobay ayaa ka digtay barakac fara badan oo ka soo muuqda Somaliland, kaas oo ah in caasimadaha Somaliland ay korayaan laakiin haddana ay jiraan dad tiro badan oo danyar ah oo ay ka baaba’een xoolahoodii iyo hab nololeedkoodii.
Mas’uulka Qaramada Midoobay ayaa hadalkan ka jeediyay magaalada Hargeysa ee caasimadda ‘Somaliland,’ halkaas oo uu la kulmay madax heer sare iyo wakiillada bulshada rayidka. Mowduuca muhiimka ah ee uu ka duulayay ayaa waxaa uu ahaa in iyada oo sanadkii 2017-kii laga hortagay in ay macluul ka dhacdo Geeska Afrika, taasi oo lagu aaneynayo dadaallada Soomaalida iyo bah-wadaagta caalamiga ah, waxaa weli taagan halista loogu jiro macluul la xidhiidha abaaraha, iyada oo malaayiin qof oo ku nool gobolka ay weli baahi weyn u qabaan gargaar bani’aaddinimo oo nolol-badbaadin ah. “Dadaallada bani’aaddinimo waa arrinta aan siineyno mudnaanta koowaad,” ayuu yidhi. “Dabcan, waa arrinta koowaad ee aan ku hayno maskaxdeenna.”Madaxa arrimaha bani-aadmnimimada ee Qaramada Midoobay Mr. Peter de Clercq. oo dhawaan safar ku yimid magaalada Hargeysa ayaa hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in sare loo qaado awoodda soo kabsashada bulshooyinka si ay uga adkaadaan saameynta abaaraha soo noqnoqda, sida macluusha. Warsaxaafadeed ay Qaramada Midoobay soo saartay oo lagaga hadlay kulamadii uu ergaygani la yeeshay madaxda Somaliland iyo waxyaabaha lagaga wada
Warbixin:Qaab Caasimada Hargeysa loo sugayo Xuska Badax banaanida Somaliland (…